Iingcamango zeNzululwazi zeSayensi eziPhakamileyo
Zama ezi ngcamango zenzululwazi ezijoliswe kwizinga lezemfundo eliphezulu. Yenza uphando lwezesayensi kwaye uhlole iingcinga ezahlukeneyo ukuvavanya.
Uvile i- caffeine yenza njengento ekhuthazayo kwaye inokunyusa uxinzelelo lwakho xa uphantsi kwefuthe layo. Unokuvavanya oku ngovavanyo.
Ukusetyenziswa kwe-caffeine ayichaphazeli ukuthayipha isivinini .
I-caffeine ayichaphazeli ukugxilwa.
Iingcamango zokuQinisa kwabafundi
Ukuba ungoqela elikhulu labafundi kwaye umfundisi ucela iklasi ukuba yiyiphi i-9 x 7. Omnye umfundi uthi 54. Kanjalo oku kulandelayo. Ngaba uyayithemba ngokupheleleyo impendulo yakho engama-63? Sithonyelwa yienkolelo zabantu abazungezile kwaye ngamanye amaxesha siyavumelana nento ekholwa yiqela. Unokufunda isantya apho uxinzelelo lwentlalo luchaphazela ukuhambelana.
Inani labafundi aliyi kuchaphazela ukuhambelana kwabafundi.
Ubudala abuchaphazeli ukuhambelana kwabafundi.
Ubulili asinasiphumo ekuhambeni komfundi.
Uvavanyo lweBhomu lweBhomu
UGeorgi Fadejev / EyeEm / Getty Izithombe
Iibhomu ze-smoke ziyamnandi kubafundi babo bonke ubudala kodwa mhlawumbi azikho izifundo ezifanelekileyo zokufunda abantwana abangaphantsi kwezinga eliphezulu. Iibhomu ze-smoke zinika indlela enomdla yokufunda ngokutsha. Zingasetyenziselwa njengezihlawulelo kwii-rocket, nazo.
Umlinganiselo wentsholongwane yebhomu yomsiyi ayiyi kuchaphazela ubungakanani bomsi okhutshwayo.
Umlinganiselo wezithako awuyi kuphazamisa uluhlu lweerobhothi lomsi .
I-Elenathewise / Getty Images
Isithenti somnxeba kufuneka ugcine amagciwane phantsi kolawulo ezandleni zakho. Unokwenza ibhakteria yenkcubeko ukuba ubone ukuba isinxephezelo sandla siyasebenza. Unokuqhathanisa iintlobo ezahlukeneyo zesisitifiketi somnxeba ukubona ukuba umntu usebenza kangcono kunomnye. Ngaba unokwenza isisitifiketi sesebenzi esisebenza ngendalo? Ngaba isinxephezelo sesandla sinemveliso?
Akukho mahluko kumsebenzi wee-sanitizers ezahlukeneyo.
Isithenti somnxeba wesandla sinokutsha.
Akukho mahluko phakathi kokusebenza phakathi kwe-sanitizer yesandla kunye ne-sanitizer yezandla.